I-Admiral Togo Heihachiro kwiMfazwe yaseRussia-yaseJapan
Ubomi bokuqala kunye nomsebenzi weTogo Heihachiro:
Unyana wamaSamray, iTogo uHeihachiro wazalelwa eKagoshima, eJapan ngoJanuwari 27, 1848. Ephakanyisiwe kwisithili saseKachiyacho sedolophu, uTogo waba nabazalwana abathathu kwaye wafundiswa endaweni. Emva kobuntwana obunokuthula, iTogo yabona inkonzo yokuqala yempi eneminyaka elishumi elinesihlanu xa wayithatha inxaxheba kwiMfazwe yase-Anglo-Satsuma. Isiphumo seNkundla yeMamgigi kunye nokubulawa kukaCharles Lennox Richardson, imfazwe emfutshane yabona iinqanawa zaseBritish Royal Navy ibhomu i-Kagoshima ngo-Agasti 1863.
Ekuvukeni kokuhlaselwa, i-daimyo (inkosi) yeSatsuma yamisa i-navy ngo-1864.
Ngokudalwa kweenqwelo, iTogo kunye nabazalwana bakhe ababini baqalisa ukukhawuleza kwi-navy entsha. NgoJanuwari 1868, iTogo yabelwa kwi-side wheeler Kasuga njengombhunqa kunye negosa lesithathu kwiklasi. Ngaloo nyanga, iMfazwe yaseBoshin phakathi kwabaxhasi bombusi kunye nemikhosi ye-shogunate yaqala. Ngenxa yokubambisana ne-Imperial, i-Satsuma navy yaqalisa ngokukhawuleza kwaye i-Togo yabona kuqala isenzo kwi-Battle of Awa ngoJanuwari 28. Ehleli eKazuga , iTogo nayo yathatha inxaxheba kwimfazwe yamaMiyo naseHakodate. Ukulandela ukuphumelela kwemperial kwimfazwe, iTogo yakhethwa ukuba ifunde imicimbi yamabutho eBrithani.
Togo Studies kwamanye amazwe:
Ukusuka eBrithani ngo-1871 kunye namanye amagosa aseJapan amancinci, uTogo wafika eLondon apho wafumana uqeqesho lwesiNgesi kunye nokufundiswa kwamasiko aseYurophu kunye nokuhlobisa.
Iinkcukacha ngokubanzi njenge-cadet kwiinqanawa zokuqeqesha i-HMS Worcester kwi-Thames Naval College ngo-1872, iTogo yaba ngumfundi onomsebenzi ohlala ehlala ebizwa ngokuthi "uJohnny Chinaman" nabalingana nabo. Isifundo sesibini eklasini yakhe, waba ngumthunywa oqhelekileyo kwiinqanawa zokuqeqesha iHMS Hampshire ngo-1875, waza wajikeleza ihlabathi.
Ngexesha lohambo, uTogo wagula kwaye amehlo akhe aqala ukuhluleka. Ukuzibeka phantsi kwiinkalo ezahlukeneyo zonyango, ezinye zibuhlungu, wathintela abahamba naye ngomkhombe ngokunyamezela kwakhe nokungabi nesikhalazo. Ukubuyela eLondon, oogqirha bakwazi ukugcina amehlo akhe kwaye waqala ukufundisisa imathematika kunye noMfundisi AS Capel eCambridge. Emva kokuhamba e-Portsmouth ukuya kwesinye isikolo, wangena kwiRoyal Naval College eGreenwich. Ngexesha lokufunda kwakhe wakwazi ukuzibonela ngokwakhe ukwakha iinqanawa ezininzi zaseJapan kwiinqanawa zokuhamba zaseBrithani.
Ekuhambeni kwe-1877 uSatsuma Rebellion, waphoswa ingxubusho eyayizisa ekhaya lakhe. Ukhuthazwe ukuba ube ngummeli ngomhla kaMeyi 22, 1878, uTogo wabuyela ekhaya ekhayeni lika- Hiei (17) elityebileyo elalisandul 'ukugqitywa kwiredi yaseBrithani. Ukufika eJapan, wanikwa umyalelo kaDaini Teibo . Ukufudukela ku- Amagi , wayejonge ngokugqithiseleyo i-Admiral Amédée Courbet yaseFranti yemikhosi ngexesha le-1884-1885 iMfazwe yaseFranco-YaseTshayina waza waya emanzini ukuze ahloniphe amabutho aseFransi e-Formosa. Emva kokunyuka kwi-rank of captain, iTogo iphinda ifumene kwimida yangaphambili ekuqaleni kweMfazwe yokuqala yeSino-Japanese ngo-1894.
Ukulawula i-cruiser uNaniwa , eTogo yatshisa izithuthi zaseBritani, eziseTshayina ezihamba ngeendlela ezihamba ngeChina, eKowshing kwi-Battle of Pungdo ngoJulayi 25, 1894.
Nangona ukucima kwaphantse kubangele isiganeko sezobupolisa eBrithani, kwakukho kwimimiselo yomthetho wamazwe ngamazwe kwaye yabonisa ukuba iTogo ibe yintloko yokuqonda iingxaki ezinokuthi zivele kwibala lehlabathi. NgoSeptemba 17, wahola uNaniwa njengenxalenye yeenqwelo zaseJapan kwi-Battle of Yalu. Inqanawa yokugqibela kwi-Admiral Tsuboi yeKozo yokulwa, uNaniwa wazihlukanisa kunye neTogo yaphakanyiswa ukuba ibuyele phambili ekupheleni kwemfazwe ngo-1895.
I-Togo kwimfazwe yaseRussia-eJapan:
Ekupheleni komquzulwano, umsebenzi weTogo waqalisa ukuphuculwa kwaye wadlulela kwiindawo ezinyuliweyo ezifana nomlawuli weKholeji ye-Naval War kunye nomphathi we-Sasebo Naval College. Ngomnyaka we-1903, uMphathiswa weNavy Yamamoto Gonnohyoe wamangalisa uMbutho wamaNxweme ngokumisela iTogo kwisithuba se-Commander-in-Chief of the Combined Fleet, okwenza ukuba abe ngumholi welizwe eliphambili.
Esi sigqibo sagxininisa uMlawuli uMeiji owabuza umgwebi. Ngokuqhambuka kweMpi yaseRussia-yaseJapan ngo-1904, i-Togo ithathe iinqanawa ukuya elwandle kwaye yahlula umkhosi waseRashiya ePort Arthur ngoFebruwari 8.
Njengokuba imikhosi yaseJapan yayingqonge iPort Arthur , iTogo igcinwe ikhuselekile kwi-offshore. Xa isixeko siwela ngoJanuwari 1905, iinqwelo zeTogo zenze imisebenzi rhoqo ngelixa lilindele ukufika kweRussian Baltic Fleet eyayihamba kwindawo yokulwa. Ekhokelwa yi-Admiral Zinovy ​​Rozhestvensky, amaRussia ahlangabezane neenqwelo zeTogo kufuphi ne-Straits of Tsushima ngo-Meyi 27, 1905. KwiMfazwe yaseTsushima , iTogo yatshatyalalisa yonke into yaseRashiya yaza yafumana igama lomnxeba ngokuthi " uNelson waseMpuma" evela kumazwe aseNtshona .
Kamva Ubomi beTogo Heihachiro:
Ekuphelelweni kwemfazwe ngo-1905, i-Togo yenziwe ilungu leBritish Order of Merit lika-King Edward VII kwaye laziwa ngokubanzi kwihlabathi. Ukushiya umyalelo wakhe wemoto, waba nguMongameli wezeMisebenzi yeeNdawo eziPhezulu kunye nokusebenza kwiBhunga eliPhezulu leMfazwe. Ekuqwalaseleni iimpumelelo zakhe, i-Togo yaphakanyiswa ukuba i-hakushaku (kubala) kwinkqubo yeeJapane yokubala. Ngokunikezelwa kwegama elihloniphekileyo leenqwelo-moya ezithandwayo ngo-1913, wanyulwa ukuba abe ngumphathi we-Prince Hirohito kunyaka olandelayo. Ukusebenza kule nxaxheba iminyaka elishumi, ngowama-1926, iTogo yaba yedwa kuphela engekho ubukumkani eya kunikwa iSigqeba esiPhakamileyo seChrysanthemum.
Umchasi omkhulu kwi-1930 yaseNondon yaseNondon yaseLondon, ebona amandla aseJapan anikwe amandla okwexeshana e-United States naseBrithani, iTogo yaphakanyiswa ngakumbi kwi-koshaku (i-marquis) ngoku-uMlawuli uHirohito ngoMeyi 29, 1934.
Ngomhla olandelayo uTogo wafa eneminyaka eyi-86. Ukuhlonishwa ngamazwe, i-Great Britain, i-United States, iNetherlands, iFransi, iItali kunye ne-China bonke bathumela iinqwelo zemfazwe ukuba bathathe inxaxheba kwi-Tokyo Bay ehamba ngeenqwelo zamanzi.
Iimpawu zeeNkokheli zaseJapan zanamhlanje: iTogo Heihachiro
I-Togo Report of the Battle of Tsushima
Ixesha: iTogo yeTsushima
Imibuzo yeDorothea Dix
Quotes Susan B. Anthony
Iimfazwe zaseNdiya: uLt Colonel George A. Custer
UMaria Mitchell: Umfazi wokuqala kwi-US Ngubani owayeyingcali yezobuchwepheshe
USelma Lagerlöf (1858 - 1940)
UMarian Anderson, iContralto
Izinto eziPhezulu ezi-10 ezikhuselekileyo kwiCanoe okanye ngeKayak
Iimolubeli-ze Awufuni Ukuzithobela Ngezifo (Iimveliso Zingozi)
I-Fat Shot KwiGalofu: Yintoni Eyiyo, Yintoni Eyibangela
Iingoma ezi-50 ezigqwesileyo ze-Hip-Hop Dance
Iincwadi kwiMbali yesiFrentshi
Indlela yokudibanisa "i-Détruire" (ukutshabalalisa)
Umtshato ohleliweyo ovela kwixesha leVedic
Ikhono leNqqqqqqqelo: Iintlobo zeeNkqenkqele zeHlabathi kunye neNtaba yeNqabana
I-Admissions yeYunivesithi yaseBluffton
I-Coca-Cola ihlawulwe ngamanzi aphantsi komhlaba kunye nokucoceka kweNdiya
Indlela yokwenza i-Oxygen okanye i-O2 yotywala
Uhlolo: I-Callaway Diablo Octane Umqhubi
Indlela Umsebenzi weeCorrents Work
Abadlali kwi-60 Seconds: Maurice de Vlaminck
I-Terminal Velocity kunye ne-Fall Fall
Ngunaphakade Kwiintliziyo Zabantu - INtshumayeli 3:11
Ukubhalwa kweeNqununu zeConven
Abafundi abaBonayo bafunde iLwimi eliPhambili ngokuBonwa
Amaphukula avelele kwi-Top 10 Career Careers
Ukubuyiswa kweNkohlakalo yokuHlaba, uMcwaningi uthi